WONDERFUL UNIVERSE: အတွေးစများ (၁)
မနက် အိပ်ယာထ နောက်ကျ ပြန်ပြီ။ အလောသုံးဆယ် ရေမိုးချိုးပြီး ထွက်လာတော့ ပုံမှန် အိမ်က ထွက်ချိန်ထက် မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက် နောက်ကျနေသည်။ ဘတ်စ်ကားကလဲ တော်တော်နှင့်ရောက်မလာတော့ လူက စိတ်သိပ် မရှည်ချင်တော့။ လမ်းလျှောက်ပြီး ဘူတာကို သွားလိုက်ရမလား စဉ်းစားပြန်တော့ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်ရအုံးမည်။ ကဲ မထူးတော့။ ကားသာ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး စောင့်ပေတော့။ ဆယ်မိနစ်ကျော်လောက်မှ ကားရောက်လာတော့ စိတ်က တော်တော်နှင့်မလာနိုင်သော ကားအပေါ် မရှိတော့။ နှိုးစက်ပိတ်ပြီး ဆက်အိပ်နေမိသော ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ အပြစ်တင်ရမည် မဟုတ်လား။ ဘူတာရောက်တော့ ကားပေါ်က အပြေးအလွှား ဆင်းမိပြန်သည်။ ခု လာနေသည့်ရထား လွတ်သွားလျှင် နောက် လာမည့် ရထားကို လေး၊ ငါးမိနစ် လောက် ဆက်စောင့်နေရ အုံးမည်လေ။"ဒေါက်"ကားပေါ်က အဆင်းမှာ ကြားလိုက်ရသော အသံကြောင့် အသံလာရာကို ကြည့်တော့ ကျွန်တော့်ဖုန်းကလေး။ ဖုန်းအိတ်ထဲက လွှင့်ကျသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ သွားပါဘီ။ ကွန်ကရိ ကြမ်းပြင်ပေါ် လွှင့်ကျမှတော့ တခုခု ဖြစ်ပီပေါ့။ ဖုန်းအိတ်ကလေးက ခုတလော ခပ်ချောင်ချောင် ဖြစ်နေတာကို မေ့နေမိတာကိုး။ လွှင့်ကျသွားသောဖုန်းကို ပြန်ကောက်ပြီး ဘူတာဘက် သုတ်ချေတင်ရင်း စစ်ဆေးကြည့်တော့ ဖုန်းဆားဗစ်စ်က အလုပ်လုပ်နေသေးသည်။ တော်ပါသေးရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဖုန်းထောင့်နားက အဖြူရောင် မက်တယ်လ်နှင့် အနက်ရောင် ဘော်ဒီမှာတော့ တော်တော်လေး ပွန်းရှသွား ခဲ့ပြီ။ ဘယ်လိုမှ အရင်လို အပြစ်အနာအဆာ ကင်းကင်း ပြန် မဖြစ်နိုင်တော့။ တခါတခါမှာတော့ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ အဲဒီလို မတော်တဆဖြစ်မှုတွေနှင့် အမှားတစ်ချို့ လုပ်မိရင်း ဘ၀မှာ ခုလို ပွန်းပဲ့ရာ အပြစ်အနာအဆာတွေ ကြုံရတတ်သည်။ ထို အနာအဆာများကို ကျွန်တော်တို့ တိုက်ချွတ်ဆေးကြောလို့ ရတာတွေ ရှိသည်။ ခု ဖုန်းကလေးလို တိုက်ချွတ်ဆေးကြောမရပဲ ထာဝရ ပွန်းပဲ့ စွန်းထင်း သွားရတာလဲ ရှိမည်။ အဲဒီလို တိုက်ချွတ် ဆေးကြောမရတော့သော အနာအဆာတွေ များမလာအောင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က သတိပြု နေထိုင်ရမည် မဟုတ်လား။ သို့သော် ကျွန်တော်က ယခုကဲ့သို့ အခါများစွာ နမော်နမဲ့နိုင် မေ့လျော့တတ်လွန်းပါသည်။မရည်ရွယ်ပဲ ဖြစ်တတ်ခဲ့သော အမှားများအတွက် ဆင်ခြင်တွေးတောစရာ စာတိုလေးတွေကို ဖတ်နိုင်အောင် ဒီနေရာလေးမှာ လာသိမ်းထားပါတယ်။Mistakes areapart of being human. Appreciate your mistakes for what they are: precious life lessons that can only be learned the hard way. Unless it'safatal mistake, which, at least, others can learn from. Al Franken, "Oh, the Things I Know", 2002The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing you will make one. Elbert Hubbard (1856 - 1915)Experience is that marvelous thing that enables you to recognizeamistake when you make it again. Franklin P. JonesWhen you makeamistake, don't look back at it long. Take the reason of the thing into your mind and then look forward. Mistakes are lessons of wisdom. The past cannot be changed. The future is yet in your power. Hugh White (1773 - 1840)If you have made mistakes, even serious ones, there is always another chance for you. What we call failure is not the falling down but the staying down. Mary Pickford (1893 - 1979)To avoid situations in which you might make mistakes may be the biggest mistake of all. Peter McWilliams, Life 101Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep. Scott Adams (1957 - ), 'The Dilbert Principle'မျှဝေခံစားသူ - မိုးကုတ်သား
လူဆိုတာ အမှားမကင်းဘူးတဲ့၊အမှားတွေများရင်တော့ ဘယ်ကောင်းမလဲ၊ပထမဦးဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မူ လျော့သွားနိုင်တယ်၊အဲဒီအချက် သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။
လွတ်ကျသွားတဲ့ Ph လေးပေါ်ကနေ မှတ်သားစရာတစ်ခုကို ရယူနိုင်တဲ့ အကို့ကိုလေးစားပါတယ်..မမီးလည်းအပြစ်အနာစာမရှိအောင်နေနိုင်ဖို့ အမှားနည်းအောင်ကြိုးစာမယ်..မှားနေရင်မလွန်ခင်မှာချက်ချင်းပြင်မယ်..
ကော်ဖီခွက်ထဲ ယင်တစ်ကောင် ကျသွားတဲ့အခါ
၇ နှစ်သား အကိုတစ်ယောက်ရဲ့ ဆုံးမစကား